Cali-Sabiix / Casaamo waxay ku taallaa koonfurta-bari oo ka soo degtay magaalada Jabuuti, caasimadda waddanka ilaa 120 kiiloomitir. Waa dhul ay wadaagaan Itoobiya iyo Soomaaliya waxayna ka kooban yihiin buuro hoose iyo buuro dhexdhexaad ah oo ay weheliyaan webiyada qallalan ee “engegsan” iyo meelo badan oo ah geedo qadhaadh ah, geedo yar yar iyo jardiinooyin yaryar oo laga sameeyay wadada ballaaran ee biyaha laga heli karo.
Goobta juqraafiyeed ee xuduudaha Itoobiya iyo Soomaaliya, noocyada kala duwan ee shimbiraha ee boggani waxay muujinaysaa noocyo isku dhafan oo ka duwan kuwa kale ee IBA ee Jabuuti. Goobta geedaha acacia waxay taageertaa waqooyiga gumeysiga, warbiilka carabiga, boobka madow, baalashka madaxa, caleemaha huruudka ah iyo madow, boodhka jaalaha ah, iyo xakamaynta rikoodhka.
Wareegga leh dhirta Tamartax waxay taageertaa noocyada habeenkii ah (waxaa laga yaabaa in habeenkii Yurub iyo Nubian ah). Jardiinooyinka waxay ku nool yihiin tiro badan oo ah soomaali bulbul iyo Ruppell, muraayad buluug ah, shakhsi khaas ah oo madax u ah madaxbannaan, laaluushka buste-qashinka ah, shimbiraha loo yaqaan ‘pythia’, shimbiraha qorraxda iyo qorraxda qorraxda leh, iyo qulqulaya. Ali-Sabieh / Assamo waa meesha kaliya ee Jabuuti oo ah meesha Abyssinian dhirbaaxada, qorraxda bari waxay taageertaa qoraxda qorraxda iyo cirridka cirridka.
Intaa waxaa dheer, aaggu wuxuu martigeliyaa laba nooc oo caalamiya oo kufilmaamid ah sida Endangered Leopard Panthera pardus pardus iyo Vulnerable Beira Antipas Dorcatragus Megalotis.